Home Somali News Somaliland: Wasiir Xaglotoosiye oo u Hanjabay Puntland Soona Dhaweeyay Talaabada Reer Buuhoodle,
Wasiirka caafimaadka Somaliland Saleebaan Ciise Axmed Xaglotoosiye, ayaa shacbiga reer Buuhoodle ku bogaadiyay talaabada ay shalay ka qaadeen Maamulka Puntland. Waxa uu farriin adag u diray hogaamiyaha Puntland Cabdiwali Gaas.
Shalay ayuu mudaharaad rabshado wataa ka dhacay Buuhoodle, kaddib markii dadweyne cadheysan ay dhagax ku billaabeen Xaflad lagu xusayay Sannad-guurada 17-aad ee kasoo Wareegtay Aasaaskii Maamul-goboleedka Puntland. Reer buuhoodle waxay ku guulaysteen kala caydhinta dadkii Puntland laga soo agaasimay ee munaasibadda waday.
dibadbaxayaasha reer Buuhoodle ayaa gubay calanka maamulka Puntland
Wasiir Xaglotoosiye oo arrintaasi ka dareen celiyay ayaa yidhi “Shacabka reer Buuhoodle iyo Ciidanka Somaliland waxaan ku ammaanayaa, ugana mahadcelinayaa sidii sharafta badnayd ee ay u caddeeyeen uguna quus gooyeen, dhuuni qaateyaashii Garoowe laga soo diray”, ayuu yidho Wasiirku, isagoo intaas raaciyay in dhuuni qaatayeel Puntland soo abaabushay meesha ka baxeen iyagoo hagoogan oo dhuumanaya.
Waxa uu farriin hanjabaad ah u diray Puntland “Waxaan leeyahay Maamulka Puntland, waad taqaanaan xuduudka inoo dhexeeya ee Ixtiraama. Somaliland ogolaan mayso inaad qas ka samaysaan gudaha Somaliland. Xuska sanad guurada Somaliland kama samayn karo Garoowe, Qardho iyo Boosaaso, sidoo kale sanad guuradiina kama samayn kartaan gudaha Somaliland”.
Waxa uu yidhi Isaga oo sii hadlaya “Cabdiwali Gaasow waad taqaan xuduudka inoo dhexeeya oo Yoocadu Garoowe 5Km bay u jirtaa, collaadda iyo fidmada Somaliland gudaheeda aad ka wado haddaad si huriso saamaynta ugu weyn aday kugu yeelanaysaa, maadaama xadku kuu jiro 5KM.
Dhacdada shalay Inta la ogyahay 10 ruux ayaa rabshadahaasi ku dhaawacmay waxaana la sheegay in hal qof ku dhaawacmay xabbad ku dhacday, halka inta kale dhagaxaan lagu dhaawacay, waxaana dadkaasi ka mid ah haweenay.
Wasiir Xaglotoosiye waxa uu sheegay in masuuliyadda dadka ku dhaawacmay iyo ammaan darrada ka dhalatay munaasibadda Puntland la timid Buuhoodle ay qaadayaan maamulkaasi.
Somaliland: Wasiirkii Hore Ee Cadaaladda Oo La Filayo In Lagu Badalo Xagla Toosiye
Wargane TV: Marwada Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland oo 9 Xafiis Ka Furtay Degmada Boon